प्रकृति र संस्कृतिको प्रदेश गण्डकी : प्रकाशचन्द्र दवाडी (भिडियोसहित) « Janata Samachar
प्रकृति र संस्कृतिको प्रदेश गण्डकी : प्रकाशचन्द्र दवाडी (भिडियोसहित)
प्रकाशित मिति : 17 September, 2019 10:05 pm
काठमाडौं । प्रकाशचन्द्र दवाडी गण्डकी प्रदेश, प्रदेशसभा सदस्य तथा गोरखा क्षेत्र नम्बर २ (ख) का जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नेपाली कांग्रेसका युवा नेतासमेत रहनुभएका दवाडी जनतामाझ लोकप्रिय हुनुहुन्छ । मुख्यगरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उहाँले पुर्याउनु भएको राजनीतिक तथा सामाजिक सेवाले जनता खुसी छन् । प्रदेशसभामा उहाँको अनुभव, संघीय प्रणालीको अवस्था, सरकार र दवाडीले गर्नुभएका विकास निर्माणका कार्यहरूको पेरिफेरीमा रहेर उहाँसँग जनता टेलिभिजनका विक्रम न्यौपानेले गर्नुभएको कुराकानी :
हामीले संघीयताको अभ्यास गरिहेका छौं । हाम्रो लागि प्रदेशसभा नयाँ हो । प्रदेश सरकारको अनुभूति जनताले गर्न पाएका छैनन् । गण्डकी पेद्रेशमा के भइरहेको छ ?
हामीले अनुभूत र सोचेको कुरा हुन पाएको छैन । मलाई पनि महसुस भएको छ । तर केही न केही त अनुभूति भएको छ । हामीकहाँ माथिबाट अङ्कुश लगाउने चलन छ । निर्देशनको मात्रै पालना गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । सरकारले अलि बढी नै अङ्कुश लगाएको होकी ? सुन्नुभएकै छ, प्रदेश स्तरका मुख्यमन्त्री बोल्नुहुन्छ, दुई दिनमै चुप लाग्नुपर्ने अवस्था हुन्छ । शुरुवात् गर्न खोज्यो त्यसको ब्लक हुन्छ । त्यस कारण जनतालाई जे सोचेको हो पूरा गर्न सकेका छैनौं । ‘सिंह दरबारको नारा गाउँ–गाउँमा’ भन्ने नारा अपुरै होकी भन्ने महसुस मलाई भएको छ ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीलाई संघले विश्वास गर्नु नसकेको होकी, यहाँलाई के लाग्छ ?
अहिलेको सरकारको पोलिसी भनेको सकेसम्म अधिकार तल नजाओस् भन्नेछ । अधिकार खुम्च्याइएको छ । पहिला राज्यको एउटा संरचना बनेको थियो । त्योभन्दा विकल्पको बाटो जाँदा फुत्किने होकी भन्ने संस्कार छ । त्यसमा पनि मैले भन्ने गरेको छु, संविधानमा व्यवस्था गरिएका कुराहरूको फलो गर्नुपर्छ ।
गण्डकी प्रदेशमा प्रतिपक्ष पनि सत्तारुढसँगै मिलेर अगाडि बढेको देखिन्छ । विकास निर्माणका कामहरू सबै मिलेर गरिएको छ कि छैन ?
मिलेर विकासलाई अवरोध गर्ने, विकासलाई राजनीतिक पेशा नै बनाएका साथीहरू हुनुहुन्छ । पेशा नै बनाएर एकै ठाउँमा बसेर खाने चलन छ । मैले भन्ने गर्छु, नेपालमा विकास नहुनुको कारण नेता, निर्माण व्यवसायी साथीहरू र कर्मचारी साथीहरू मध्येमा ५० प्रतशितभन्दा माथि जो–जो हुनुहुन्छ उहाँहरूको सोच नै मिल्ले छ । हामी प्रतिपक्ष राम्रा कुरालाई मात्रै मिल्छौं । नराम्रा कुरालाई मिल्दैनौं । बुलन्द आवाज प्रतिपक्षले लगेको छ । विद्रोह गरेर, कुर्सी उचालेर, भाँचेर, झगडा नै गरेर हुने केही छैन । सालिन प्रतिपक्ष भन्ने गरिन्छ । हामी संयम छौं । सालिन छौं । हामी नै उदन्ड भयौं भने जनताले उदन्ड कुराहरू बाहिर ल्याइदिन बाध्य त हुनैपर्छ । त्यसैले सालिन रूपमा गाउँको विकास, देशको विकाससँगै गण्डकी प्रदेशलाई नमूना प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । त्यसैले सालिन देखिएको मात्रै हो ।
हेर्नुहोस् पूरा भिडियो
च्याउ खेतीमा महिलाकाे आकर्षण
स्याङ्जा । गल्याङ नगरपालिका-३ बल्पुकका किसान च्याउ खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । ‘किसान बल्पुक कृषक
सरकारी कार्यालयबीचकाे विवाद : सडकबीचमै बिजुलीकाे खम्बा
शिब बोहोरा म्याग्दी । विकास योजना सञ्चालन गर्दा सरकारी कार्यालय एकआपसमा समन्वय गर्दैनन् भन्ने एउटा
प्रथम राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सुरु
राजन पौडेल पर्वत । महाशिला गाउँपालिकाको आयोजनामा शनिबारबाट प्रथम राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता सुरु भएको छ
गाँजाबाटै आउँछ पाँच वर्षमै समृद्धि !
काठमाडौं । मुलुकमा समृद्धि ल्याउनका लागि गाँजाको खेती उपयुक्त विकल्प भएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
चीनबाट ल्याएका नेपालीमा परीक्षण गर्दा सबैको…
काठमाडौं । राजधानीबाट प्रकाशित हुने राष्ट्रिय स्तरका पत्रपत्रिकाले बुधबार राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य र साँस्कृतिक लगायतका विविध पक्षको समाचार…
किन बढ्यो मासुको मूल्य ? खुल्यो…
काठमाडौं । केही सातायता कुखुराको मासुको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा आकाशिएको छ । उद्योगीसँग साँठगाँठको कारण मासुको मूल्य वृद्धि भएको रहस्य…
२०७६ फागुन ७ गतेको राशिफल
मेष- काममा व्यवधान आउनेछ । आफन्तसंग असन्तुष्टि रहनेछ । वृष- घरायसी मनमुटाव बढ्नेछ । मित्रसँग दुश्मनी हुनेछ । मिथुन- भाइबन्धुको सहयोग मिल्नेछ ।…
सवारी दुर्घटनामा ४ को ज्यान गयो
काठमाडौं । मुलुकको छुट्टाछुट्टै स्थानमा भएको सवारी दुर्घटनामा ४ जनाले जीवन गुमाएका छन् । बाराको पचरौता नगरपालिकामा मोटर साइकल पल्टिँदा…
‘जता नि चोर ! विकास देख्ने…
काठमाडौं । पछिल्लो समय ‘जता नि चोर’ गीतको कारण लोक गायक पशुपति शर्मा चर्चा र विवादमा आएका छन् । त्यसमा…
सञ्चारकर्मी भुसालद्वारा आत्महत्या
चीनबाट ल्याएका नेपालीमा परीक्षण गर्दा सबैको ‘नेगेटिभ’
साउदीमा महिलाले पाउँदैनन् तलब
चल्लामा १२ करोड लुट
किन बढ्यो मासुको मूल्य ? खुल्यो रहस्य, किसानद्वारा विभाग घेराउ
संसद पस्यो बलात्कार, दोषीलाई कारबाही माग